UKUHLALA UKUHLALA - 802Quits
Ikhaya » Iivenkile » UKUHLALA PHANTSI
Siyavuyisana nawe ngokuthatha isigqibo sokuhlala ungatshayi!
Nokuba le yinzame yakho yokuqala okanye Uyekile amaxesha amaninzi ngaphambili, ukuhlala ungenalo icuba kokokugqibela, okona kubaluleke kakhulu, kwaye kuhlala kuyeyona nto inzima kwinkqubo yakho. Qhubeka uzikhumbuza ngazo zonke izizathu ozikhethele ukuyeka icuba. Yazi ukuba iziliphu zinokwenzeka, kwaye oko akuthethi ukuba kuya kufuneka uqale phantsi. Ngezixhobo zasimahla kunye neengcebiso ezikhoyo apha, kunokwenzeka ukuba uhlale ungabinacuba.
Izixhobo zokuyeka ukuzonwabisa>
Indlela yokuLawula iMinqweno>